အင်တာနက်ပေါ်မှအပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ပြီးနောက်ကြည့်ရှုခြင်းအပြောင်းအလဲသည်အင်တာနက် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ဆက်နွယ်သည် (2016) - Your Brain On Porn
ရရှိနိုင်အွန်လိုင်း 8 ဒီဇင်ဘာလ 2016
ခရစ်ယာန် Laiera, ,
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း (IPD) သည်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ IPD ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရန်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအလုပ်မဖြစ်သောအသုံးပြုမှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအချက်တစ်ခုအဖြစ်ယူဆနိုင်သည်ဟုသီအိုရီအရယူဆခဲ့သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း၏ခံစားချက်အပေါ်စိတ် ၀ င်စားမှုကိုဖြေရှင်းရန်ယောက်ျားလေးများပါ ၀ င်သောနမူနာသုံးခုပါသောအွန်လိုင်းလေ့လာမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများအား IPD နှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများ၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်၎င်းတို့၏အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလှုပ်ရှားမှုများအားလှုံ့ဆော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သင်တန်းသားများကိုသူတို့၏လက်ရှိစိတ်အခြေအနေ၊ လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခြင်းကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုသီးသန့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သူတို့ကိုယ်တိုင်မကြည့်မီနှင့်အပြီးမတိုင်မီတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ မေးမြန်းခဲ့သည်။ ဒေတာအချက်အလက်များအရ IPD နှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းမွန်သော၊ နိုးကြား။ အေးဆေးတည်ငြိမ်သော၊ နေ့စဉ်ဘဝတွင်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရှာဖွေရန်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ပုဂ္ဂလိကပတ်ဝန်းကျင်တွင်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအားကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုခြင်းသည်စိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲခြင်းနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုညွှန်းကိန်းများနှင့်အတူလိုက်ပါလာသည်။ ထို့အပြင် IPD နှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများသည်အင်တာနက် - ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများမကြည့်မီနှင့်ပြီးနောက်တွင်စိတ်အခြေအနေနှင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်ကောင်းမွန်သော၊ ရလဒ်အနေဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်း၏စိတ်နှင့်လိင်မှုနှိုးဆွမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသသည်။ ထို့ကြောင့်ရလဒ်များသည်အင်တာနက် - ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းမှရရှိသောအပြုသဘောဆောင်ခြင်း (နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအားဖြည့်ခြင်း) သည် cue-reactivity နှင့်တပ်မက်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သော IPD ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာသီအိုရီဆိုင်ရာယူဆချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။
အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်၏အလားအလာအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (င်ထဲကဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်ကမ့်ဘဲလ်နှင့် Kohut, 2016, Grubbs et al ။ , 2016, Hald နှင့် Malamuth, 2008, Harkness et al ။ , 2015, ပေတရုနှင့် Valkenburg, 2014, Shaughnessy et al ။ , 2014 နှင့် Stanley et al ။ , 2016) ။ ဒါဟာတချို့တစ်ဦးချင်းစီဟာမကြာခဏကြိမ်သုံးပြီးတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားသောမိမိတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, နှင့် ပတ်သက်. ထိန်းချုပ်အရှုံးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောကျောင်းကို / ပညာသင်နှစ် / အလုပ် functioning (အဖြစ်အများအပြားဘဝ domains များအတွက်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ, သတင်းပို့ကြောင်းသိသာဖြစ်လာသည်Duffy et al ။ , 2016, Griffiths က, 2012 နှင့် Wéryနှင့် Billieux, 2015) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏စွဲလမ်းသဘောသဘာဝနေဆဲအခြေအတင်ဆွေးနွေးနေသည် (Potenza, 2014), ဒါပေမယ့်အများကြီးသုတေသီများ (ယေဘုယျအားဖြင့်စောင့်ကြည့်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုနှစ်ဦးစလုံးစွဲလမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်အကြောင်းငြင်းခုန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2014, Garcia ကနှင့် Thibaut, 2010, Kraus et al ။ , 2016 နှင့် et al Love ။ , 2015) ။ အချို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏စွဲလမ်းမြင်ကွင်းလိင်စွဲလမ်းသို့မဟုတ် hypersexuality (များ၏တိကျသောပုံစံဖြစ်စေခြင်းငှါငြင်းခုန်နေချိန်မှာGarcia ကနှင့် Thibaut, 2010 နှင့် Kafka, 2015), အခြားသူများအား (ကကအင်တာနက်စွဲလမ်းတဲ့တိကျတဲ့အမျိုးအစားအဖြစ်ခွဲခြားသင့်သည်ဟုငြင်းခုန်Laier နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, 2014 နှင့် လူငယ်တို့, 2008) ။ အမှန်စင်စစ်ညစ်ညမ်း (စွဲလမ်းအသုံးပြုမှုပုံစံကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အန္တရာယ်မှာအင်တာနက်ကိုလျှောက်လွှာဖြစ်ပြခဲ့ပါတယ်Meerkerk, van den Eijnden, & Garretsen, 2006) ။ သောကြောင့်ယင်း၏ phenomenology ပေါ်တွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆွေးနွေးမှု၏ငါတို့သည်အ DSM-5 (များတွင်အသုံးပြုအင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါမှတစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်အတွက်ဝေါဟာရကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုရောဂါ (IPD) ကိုသုံးယား, 2013) ။ IPD ၏အဖြေရှာတဲ့စံမသဘောတူညီချက်ကိုလည်းမရှိကတည်းကဖြစ်ရပ်ဆန်းများပျံ့နှံ့သာခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခု (ဆွီဒင်နိုင်ငံများအတွက်နမူနာကိုယ်စားလှယ်ဆန်းစစ်နှင့်အထီးသင်တန်းသားများ၏အမျိုးသမီးနှင့် 2% ၏ 5% IPD လက္ခဏာတွေသတင်းပို့တွေ့ရှိခဲ့Ross, Månsson, & Daneback, 2012).
IPD များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလေးစားမှုနှင့်အတူကအလတ်စား၏ဝိသေသလက္ခဏာများ (ဥပမာအားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, အမည်ဝှက်, အသုံးပြုနိုင်စွမ်း), (ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့လှုံ့ဆျောမှုမှအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့သည်Cooper, Delmonico, Griffin-Shelley, & Mathy, 2004) ။ အသုံးပြုသူများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများမှလေးစားမှုနှင့်အတူကတစ်ဦးချင်းစီပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝိသေသလက္ခဏာများ (ဥပမာ, မြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား) က IPD လက္ခဏာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် predisposed စေခြင်းငှါစောဒကတက်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ဤလက္ခဏာများညစ်ညမ်းပါသည် (ဥပမာ, အပြုသဘောအသုံးပြုမှုကိုမျှော်လင့်ထားနှင့်ဆက်စပ်သောသိမြင်မှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်ကြောင်း ) (Laier & အမှတ်တံဆိပ်, 2014) ။ ကြောင့်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြည့်၏အသုံးအနှုန်းများအတွက်အားဖြည့်သက်ရောက်မှုရန်, အေးစက်၏လုပ်ငန်းစဉ်များ cue-reactivity ကိုနှင့်ပြည်တွင်းသို့မဟုတ်ပြင်ပစွဲ-related တွေကိုမှတဏှာတုံ့ပြန်မှုရရှိလာတဲ့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်သွားစေသင့်ပါတယ်။ IPD များအတွက်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်တဏှာတုံ့ပြန်မှု၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍအဘို့သက်သေအထောက်အထား (တော်တော်များများလေ့လာမှုများအတွက်ပြသထားသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2011, Laier et al ။ , 2013, Laier et al ။ , 2014, Laier et al ။ , 2015, Rosenberg ကနှင့် Kraus, 2014 နှင့် Snagowski et al ။ , 2015) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အထူးသဖြင့်သူတို့အားတစ်ဦးချင်းစီစိတ်ကျရောဂါစိတ်ဓါတ်များသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှု (ရငျဆိုငျဖွရှေငျးဖို့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု functionalize သူကို IPD ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကျရောက်နေတဲ့သောယူဆချက်နှင့်ကိုက်ညီများမှာCooper, Putnam, Planchon, & Boies, 1999) ။ ဒါကယူဆချက်မှာလည်း ((ငါ-PACE ပုဂ္ဂိုလ်-အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု-သိမှတ်ခံစားမှု-Execution ၏ Interaction အတိုကောက်) တိကျသောအင်တာနက်စွဲ၏ငါ-PACE မော်ဒယ်အတွက်အကြံပြုထားသည်အမှတ်တံဆိပ်, လူငယ်, Laier, Wolfling, & Potenza, 2016) ။ စံပြတစ်ခုမှာအယူအဆလက်ရှိခံစားချက်တိကျတဲ့အင်တာနက်ကိုလျှောက်လွှာ (ဥပမာ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း) နှင့်တိကျသော application ကို အသုံးပြု. လက်ခံရရှိသောသက်ရောက်မှုကိုအင်တာနက်နှင့်ဆက်စပ်သောသိမြင်မှုအားဖြည့်သင့်ကြောင်းသုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်အင်တာနက်ကိုလျှောက်လွှာများအသုံးပြုခြင်းစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ဓါတ်များနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းစိတ်ကူးနှင့်မျှော်မှန်းလည်းအဖြစ်ကောင်းစွာ, အားဖြည့်ခံရဖို့စဉ်းစားခြင်းနှင့်အထွေထွေအလုပ်မဖြစ်ဖြေရှင်းစတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ လည်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် psychopathological ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာစွဲလမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတည်ငြိမ်ဒါမှမဟုတ်အတွေ့အကြုံများအားဖြင့်ပိုမိုပြင်းထန်လာလိမ့်မည်။ အလုပ်မဖြစ်ဖြေရှင်း IPD မှဆက်စပ်ခံရဖို့ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း (Laier & အမှတ်တံဆိပ်, 2014), IPD လက္ခဏာတွေများအတွက်အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်လက်ရှိခံစားချက်နှင့်စိတ်ဓါတ်များအပြောင်းအလဲများကို၏အခန်းကဏ္ဍကိုယခုအချိန်အထိ, စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပုံမှန်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူတစ်ဦးနမူနာများတွင်အောက်ပါယူဆချက် addressing ဖွငျ့ဤသုတေသနကွာဟမှုကိုဖြည့်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့သည်။ ။ 1) IPD ဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုယေဘုယျစိတ်ဓါတ်များနှင့်သိမွငျစိတ်ဖိစီးမှု,2နှင့်ဆက်စပ်သောကြသည်) စိတ်သဘောထား IPD ဆီသို့ဦးတည်နေကြသည် အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမီနှင့်ပြီးနောက်လက်ရှိခံစားချက်နှင့်လိင်စိတ်နိုးထဖို့ဆက်နွယ်, IPD ဆီသို့ဦးတည်3။ ) စိတ်သဘောထားကြောင့်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှစိတ်ဓါတ်များနှင့်လိင်စိတ်နိုးထပြောင်းလဲမှုများနှင့်4မှဆက်စပ်နေကြသည်။ ) IPD အသုံးပြုဖို့လှုံ့ဆျောမှုဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုအကြားဆက်ဆံရေး အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ရရှိခဲ့လိင်စိတ်နိုးထနေဖြင့်တည်းဖြတ်သည်။ ဤအယူဆချက်ဖြေရှင်းရန်, သုံးတိုင်းတာသောအမှတ်နှင့်အတူအွန်လိုင်းမှလယ်ပြင်လေ့လာမှုကောက်ယူခဲ့သည်။
2.1 ။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
သင်တန်းသားများ Duisburg-အက်ဆင်း (ဂျာမဏီ) ၏တက္ကသိုလ်မှအီးမေးလ်စာရင်းများ, လူမှုကွန်ယက်ဆိုဒ်များခြင်း, ကြော်ငြာများမှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဖော်ပြချက်အွန်လိုင်းလေ့လာမှုကိုအင်တာနက်-ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်သာအထီးတစ်ဦးချင်းစီပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြသည်ကြောင်းကိုအတိအလင်းညွှန်ပြ။ ပါဝင်ဆောင်ရွက်စိတ်ဝင်စားတစ်ဦးချင်းစီက e-mail ဖြင့်ဖိတ်ကြားချက်ကိုဖြေဆိုခိုင်းတယ်, ပြီးတော့လေ့လာမှု၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ကနေတဆင့်ရှင်းလင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုသုံးတိုင်းတာသောအမှတ်နှင့်အတူစစ်တမ်းတစ်ခုအဖြစ်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအစိတျအပိုငျးမှာတော့သင်တန်းသားများကို (က, လိင်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေများအတွက်အင်တာနက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသုံးဘာသာရပ်သိမွငျစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် IPD လက္ခဏာတွေ sociodemographic ရဲ့ variable အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏t1) ။ ဒါဟာသူတို့ Self-determinedly နောက်တစ်ကြိမ်များအတွက်ပုဂ္ဂလိကပတ်ဝန်းကျင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်လျှင်, သူတို့သည် (ဒုတိယတိုင်းအမှတ်မပြုမီ၎င်းတို့၏လက်ရှိခံစားချက်နှင့်လိင်စိတ်နိုးထနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုဖို့တောင်းသောသင်တန်းသားများကိုရှင်းပြခဲ့ t2) နှင့် (တတိယတိုင်းတာခြင်းအချက်ပြီးနောက်, t3) ။ သင်တန်းသားများကိုရေးထားလျက်ရှိ၏အသိပေးသဘောတူညီခကျြကိုပေးတော်မူ၏ပြီးနောက်ထိုသူတို့တိုင်းတာသောအမှတ်အနေဖြင့်မိမိတို့၏ data တွေကိုကိုက်ညီဖို့တိုကင်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အားလုံးစေတနာ့ဝန်ထမ်း BestChoice (3 €á 50 ဘောက်ချာ,5€á 20 ဘောက်ချာ,5ဘောက်ချာá 10 €) မှတဦးတည်းဘောက်ချာအနိုင်ရမယ့်ထီတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဒေတာအခုဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အဘို့အ check လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်နှင့်မျှမတို့သိသာပြဿနာများကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုဒေသခံကျင့်ဝတ်ကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
2.2 ။ သင်တန်းသားများကို
နမူနာ (80 အထီးတစ်ဦးချင်းစီဖွဲ့စည်းMအသက်အရွယ် = ၂၆.၄၁ နှစ်၊ SD = 6.23, အကွာအဝေး: 18-55) ။ ဆိုလိုသည်မှာပညာရေးသည် ၁၂.၉၀ နှစ်ဖြစ်သည်။SD = 0.45), 43 တစ် ဦး ချင်းစီ (53.8%) မိတ်ဖက်ရှိသည်ဖို့ညွှန်ပြ။ လူ ၄၉ ယောက်ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ဟာ“ လိင်ကွဲသူ”၊ ၁၂ က“ မဟုတ်ဘဲလိင်တူဆက်ဆံသူ”၊ ၅ က“ bisexual”၊ ၂ က“ လိင်တူဆက်ဆံသူ” နှင့် ၁၂ ကို“ လိင်တူဆက်ဆံသူ” အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ တိကျသောအင်တာနက်အပလီကေးရှင်းများအားလိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကို အသုံးပြု၍ ပါဝင်သူများနှင့်ဤတိကျသောအပလီကေးရှင်းများအတွက်သုံးစွဲသည့်အတန်ကြာအချိန်ကိုဖော်ပြသည် စားပွဲတင် 1။ နမူနာ၏ခြောက်ဆယ်ခြောက်သင်တန်းသားများမှာစစ်တမ်းပြီးစီး t2 နှင့် t3 ။ ဒီ subsample ၏ mean အသက်အရွယ် (25.91 ခဲ့သည်SD = 5.43) ။ အဆိုပါနမူနာအပေါငျးတို့သတစ် ဦး ချင်းစီပုံမှန်အခြေခံ cybersex applications များသုံးစွဲဖို့ညွှန်ပြ။
နမူနာ၏ဆိုက်ဘာလိင်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များ၏ဖော်ပြချက်။ ပျှမ်းမျှရမှတ်များနှင့်စံသွေဖီခြင်းများသည်တိကျသောဆိုက်ဘာဆက်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုအသုံးပြုရန်သုံးစွဲသည့်အချိန် (မိနစ် / အပတ်) ကိုရည်ညွှန်းသည်။
မှတ်စု။ (တဦးတည်းကိုအသုံးပြုပြီးသင်တန်းသားများ၏နံပါတ် ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါn = 8) နှစ်ခု (n = 14), သုံး (n = 8) လေး (n = ၂၅ နှစ်၊ ငါး ​​(n = 12) ခြောက်n = ၁၀) ဒါမှမဟုတ်ခုနစ်ခုn = 3) ဟုမေး၏တိကျသောဆိုက်ဘာဆက်ဆတ် applications များ။ အားလုံးဆိုလိုရမှတ်များနှင့်စံသွေဖီတိကျတဲ့ cybersex application ကိုအပတ်စဉ်အသုံးပြုတဲ့သူတစ် ဦး ချင်းစီကိုသာရည်ညွှန်းသည်။
At t1, IPD ၏ရောဂါလက္ခဏာများ, ယေဘုယျစိတ်ဓါတ်များ, ရိပ်မိစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အင်တာနက် - ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလှုံ့ဆျောမှုအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ IPD နှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများကိုလိင်စွဲချက်အတွက်ပြုပြင်ထားသောအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်မှု (s-IATsex, Cronbach's) ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ α = 0.83) ( Laier et al ။ , 2013 နှင့် Wéry et al ။ , 2015subscales နှစ်ခုဖြစ်သော“ ထိန်းချုပ်မှု / အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုဆုံးရှုံးခြင်း” (s-IATsex-1) နှင့်“ လူမှုရေးပြ/နာများ / တဏှာ” (s-IATsex-2) တို့ပါဝင်သည်။ အချက် (၁၂) ခုသည် 1 (= ဘယ်တော့မှ) မှ ၅ အထိ (= အလွန်မကြာခဏ) မှစကေးဖြင့်ဖြေကြားခဲ့သည်။ ၄ င်းသည်စုစုပေါင်းရမှတ်အတွက် IPD ၏မြင့်မားသောရမှတ်များသို့မဟုတ်မြင့်မားသောလက္ခဏာများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အထွေထွေစိတ်ဓာတ်ကို Multidimensional Mood State Questionnaire (MDMQ, Cronbach's) ဖြင့်အကဲဖြတ်သည် α = 0.94) (Steyer, Schwenkmezger, Notz, & Eid, 1997) ။ ပစ္စည်း ၂၄ မျိုးကို 1 (= လုံးဝမရွိပါ) ၅ မှစကေးဖြင့်ဖြေကြားခဲ့ပြီး (subscales - good-bad) (MDMQ-good)၊ “ နိုးနေခြင်း” (MDMQ-awake) ၏ရမှတ်များကိုဆိုလိုသည်။ နှင့်“ အေးဆေးတည်ငြိမ်သောအာရုံကြော” (MDMQ-calm) ကိုတွက်ချက်သည်။ အမြင့်ရမှတ်များသည်မကောင်းသောအခြင်းအရာထက် ပို၍ ကောင်းမွန်သည်၊ ငြီးငွေ့ခြင်းထက်နိုးကြားသည်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစားသုံးမှုစာရင်း (PCI, Cronbach's) α = ၀.၈၃) ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအတွက်လှုံ့ဆော်မှုအတိုင်းအတာလေးခုကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။Reid, Li, Gilliland, Stein, & Fong, 2011) ။ ပစ္စည်း ၁၅ မျိုးကို ၁ မှ (= ငါဘယ်တော့မှမကြိုက်ပါ) မှ ၅ အထိ (= ငါကဲ့သို့သောမကြာခဏဖြစ်သည်) အတိုင်းအတာဖြင့်ဖြေကြားခဲ့ပြီး၊ “ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှောင်ရှားခြင်း” (PCI-EA)၊ “ Sexual Curiosity” (PCI-SC) ၏ subscales များအတွက်ရမှတ်များကိုဆိုလိုသည်။ ,“ စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှာဖွေခြင်း” (PCI-ES) နှင့်“ လိင်ဆိုင်ရာအပျော်အပါး” (PCI-SP) ကိုတွက်ချက်သည်။ ရမှတ်မြင့်များသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအတွက်အလွန်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုအားနည်းချက်ကိုညွှန်ပြရန်, နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုများအတွက် Trier Inventory ၏စိစစ်ဗားရှင်း (TICS, Cronbach ရဲ့ α = 0.92) လျှောက်ထားခဲ့သည် (Schulz, Schlotz, & Becker က, 2004) ။ မေးခွန်းလွှာသည်0(= ဘယ်တော့မှ) မှ (= အလွန်မကြာခဏ) မှစကေးပေါ်တွင်ဖြေဆိုရန်ရှိသည်သောပစ္စည်းများတကျိပ်နှစ်ပါးနှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်သုံးလအတွင်းရိပ်မိစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုအဘို့အမေးတယ်။ တစ် ဦး ကပေါင်းလဒ်ရမှတ်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ မြင့်မားသောရမှတ်များမြင့်မားသောရိပ်မိစိတ်ဖိစီးမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်ကိုက်ညီသည် ( Laier et al ။ , 2014 နှင့် Laier et al ။ , 2015), တစ်ဦးချင်းစီ "ဟုတ်ကဲ့ / no" ဆိုတဲ့သူတို့တစ်တွေတုံ့ပြန်မှု format နဲ့အတူသီးခြား Internet application များအသုံးပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေမမေးမလျှောက်ခဲ့ကြသည်။ ဒီတော့လျှင်, ငါတို့သည်အဘယ်သို့မကြာခဏ ( "တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ထက်လျော့နည်း", "အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်နှစ်နှင့်တစ်ကြိမ်ထက်လျော့နည်းတစ်ခုချင်းစီကိုတစ်လ", "အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်လနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအပတ်ကထက်လျော့နည်း" ဟုမေး "အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ပါတ် နှင့်တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ထက်လျော့နည်း "," အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်နေ့ ") နှင့်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး (အဘို့" အသုံးပြုမှုနှုန်းမိနစ် ") သူတို့ကဘာလျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုပါ။ တစ်ဦးချင်းစီကျဘာလျှောက်လွှာနှုန်းမိနစ်များတွင်အပတ်စဉ်သုံးစွဲအချိန်အတောအတွင်းရမှတ်များတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။
At t2 နှင့် t3 ကျနော်တို့မတိုင်မီနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်လက်ရှိခံစားချက်နှင့်လိင်စိတ်နိုးထအကဲဖြတ်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သို့ "ယေဘုယျအားဖြင့်ငါခံစားရတယ် ... " ကနေ MDMQ ၏နည်းဥပဒေပြုပြင်ထားသော "အခုငါ ... ခံစားမိ" နှင့်မှာမေးခွန်းလွှာဖြေဆိုရန်သင်တန်းသားများကိုမေးသော် t2 (Cronbach ရဲ့ α = 0.91) နှင့်မှာ t3 (Cronbach ရဲ့ α = 0.93) ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် MDMQ - ကောင်းမှု၊ MDMQ - နိုးကြားမှုနှင့် MDMQ - အေးဆေးတည်ငြိမ်သောရမှတ်များကိုတွက်ချက်သည် t2 နှင့် t3 ။ ထို့အပွငျမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရမှတ် ( "t၃” -“t၂” သည်ကောင်းမွန်သောခံစားမှု (increase - ကောင်းသော)၊ နိုးကြားမှု (Δ - နိုးခြင်း) နှင့်အေးဆေးသော mood စိတ်တည်ငြိမ်မှု (calm - အေးဆေးမှု) ကိုကိုယ်စားပြုရန်တွက်ချက်သည်။ ရမှတ်များများသည်ကောင်းမွန်သော၊ နိုးကြားနေသောသို့မဟုတ်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောစိတ်နေစိတ်ထားကိုမြင့်တက်စေသည်။ လိင်မှုနှိုးဆွမှု၏ညွှန်းကိန်းများအရပါဝင်သူများသည် ၀ =2မှ“ လိင်မှုနှိုးဆွမှုမရှိ” သို့ ၁၀၀ အထိ“ လိင်မှုနှိုးဆွမှု” နှင့်“0masturbate ရန်မလိုအပ်” မှ ၁၀၀ အထိ masturbate လုပ်ရန်လိုအပ်မှုကို ၄ င်း၏လက်ရှိလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှစ်ခုလုံးကိုညွှန်ပြခဲ့သည်။ = မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့အလွန်ပြင်းထန်သောလိုအပ်မှု t2 နှင့် t3 ။ mean ရမှတ်မှာ t2 နှင့် t3 တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်, မြင့်မားသောရမှတ်ခိုင်မာတဲ့လိင်စိတ်နိုးထကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ် masturbate ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးအားယုတ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရမှတ် ( "t၃” -“t3”) ကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွမှု (Δ-လိင်စိတ်နိုးထမှု) ၏ကျဆင်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေရန်လိုအပ်မှု (Δ-လိုအပ်ချက်မှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း) ကိုကိုယ်စားပြုရန်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ ရမှတ်များများကလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုအားကောင်းစေပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့လိုသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့တွင်အော်ဂဇင်တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက် ပို၍ ကြုံတွေ့ဖူးသလား၊ ၎င်းသည်အော်ဂဇင်မ်မ်များကိုမည်မျှကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုရှိသနည်းဟုမေးမြန်းခဲ့သည် (0 မှ "အားလုံးကျေနပ်စရာမရှိပါ" အထိ ၁၀၀ အထိ = "အလွန်ကျေနပ်စရာ" မှစကေး) ။ အော်ဂဇင်များနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုရခြင်းသည်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှု၏ညွှန်ပြချက် (“ လိင်ဆန္ဒပြည့်မှု”) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
မေးခွန်း၏ဖော်ပြရန်ရလဒ်များကိုအတွက်တင်ပြကြသည် စားပွဲတင် 2။ S-IATsex ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါင်းလဒ်ရမှတ် (21.09 ခဲ့သည်SD = 0.69, အကွာအဝေး: 12-42) ။ s-IATsex သည် MDMQ-good နှင့်သိသိသာသာဆက်စပ်မှုရှိသည် (r = - 0.32, p = 0.004), MDMQ- နိုး (r = - 0.29, p = 0.009), MDMQ- အေးဆေးတည်ငြိမ်သော (r = - 0.30, p = 0.007), အ PCI-EA (r = ၆၈.၃၃၊ p <0.001), PCI-ES (r = ၆၈.၃၃၊ p <0.001) နှင့် TICS (r = ၆၈.၃၃၊ p ≤ 0.001) ။ s-IATsex သည် PCI-SC နှင့်သိသိသာသာဆက်စပ်မှုမရှိပါ။r = ၆၈.၃၃၊ p = 0.91) နှင့် PCI-SP (r = ၆၈.၃၃၊ p = 0.85) ။
မှာကိုလည်းစစ်တမ်းပြီးစီးခဲ့သောသူ 66 ပါဝင်သူများ၏ subsample ထံမှ t2 နှင့် t3, 65 စောင့်ကြည့်ညစ်ညမ်းအွန်လိုင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့ညွှန်ပြ။ ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် masturbating စဉ်ထို့အပြင်တက်ရောက်လာသူများ၏ 61 အနည်းဆုံးအော်ဂဇင်ကိုကြုံခဲ့ရသည်။ သုံးတစ်ဦးချင်းစီနှစ်ခုကြုံတွေ့ကြညွှန်ပြလျက်, နှစ်ခုတစ်ဦးချင်းစီသုံး orgasm (ကြုံတွေ့ကြညွှန်ပြM = ၆၈.၃၃၊ SD = 0.41) ။ လူလေးယောက်သည်အော်ဂဇင်ကိုမကြုံခဲ့ရကြောင်း ထပ်မံ၍ ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျန်တဲ့ ၆၁ ယောက်ရဲ့နမူနာမှာစုစုပေါင်း s-IATsex ရမှတ်ရဲ့အမှတ် M = ၆၈.၃၃၊ SD = 6.59 ။ s-IATsex-1 ၏ပျမ်းမျှရမှတ်မှာ M = ၁၁.၁၂ (SD = 4.70), s-IATsex-2 ၏ယုတ်ရမှတ်ဖြစ်ခဲ့သည် M = ၁၁.၁၂ (SD = 2.79) ။ ဆိုလိုသည်မှာ MDMQ ကောင်းခြင်း၊ MDMQ နိုးထမှု၊ MDMQ အေးဆေးတည်ငြိမ်မှု၊ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများလိုအပ်သည်။ t2 နှင့် t3 အဖြစ်၏ရလဒ်များကို tမှီခိုနမူနာများအတွက် -tests အတွက်တင်ပြကြသည် စားပွဲတင် 3.
မှာတိုင်းတာမေးခွန်း၏ဖော်ပြရန်ရလဒ်များကို t2 နှင့် t3 အဖြစ်၏ရလဒ်များကို tမှီခို variable တွေကိုအဘို့အ -tests ။
ကိုဟင်dမှီခိုနမူနာဘို့။
p ≤ 0.01 ။
ပျမ်းမျှအားတွင်, လိင်စိတ်နိုးထအတွက်လျော့နည်း (Δ-လိင်စိတ်နိုးထ) ခဲ့ M = ၁၁.၁၂ (SD = 38.42), တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရန်လိုအပ်ကြောင်း၏ decrease (masturbate urb- လိုအပ်ချက်) ဖြစ်ခဲ့သည် M = ၁၁.၁၂ (SD = 26.08) ။ နုတ်တဲ့အခါ tကနေ2t3, ကောင်းသောစိတ်ဓါတ်များအတွက်တိုး (Δ-ကောင်းသော) ခံခဲ့ရသည် M = ၁၁.၁၂ (SD = 0.54), နိုးစိတ်ဓါတ်များ (Δ-နိုး) အတွက်တိုးခဲ့သည် M = ၁၁.၁၂ (SD = 0.59), နှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်စိတ်ဓါတ်များ (Δ-အေးဆေးတည်ငြိမ်) ၏တိုးခဲ့သည် M = ၁၁.၁၂ (SD = 0.68) ။ s-IATsex ရမှတ်များနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်စိတ်ဓါတ်များ၏အညွှန်းကိန်းများအကြား Pearson-ဆက်စပ်မှု t2 နှင့် t3 မှာပြနေကြသည် စားပွဲတင် 4.
စားပွဲတင်4။
(မတိုင်မီလိင်စိတ်နိုးထနှင့်ခံစားချက်၏ညွှန်းကိန်းများနှင့်အတူအင်တာနက်ကို-ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုရောဂါ၏ညွှန်းကိန်းများ Pearson-ဆက်စပ်မှုt2) နှင့်အောက်ပါ (t3) ပုဂ္ဂလိကပတ်ဝန်းကျင်အင်တာနက်ကိုစောင့်ကြည့်။
- ၃၆ - ၃၆ 0.02
- ၃၆ - ၃၆ - ၃၆
- ၃၆ 0.06 - 0.25⁎
0.03 - ၃၆ 0.19
- 0.41⁎⁎ - 0.44⁎⁎ - ၃၆
0.14 0.24 - ၃၆
p ≤ 0.05 (ဆက်စပ်မှု alpha = 5%, Two- အမြီးနှင့်အတူသုညကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်) ။
p ≤ 0.01 (ဆက်စပ်မှု alpha = 1%, Two- အမြီးနှင့်အတူသုညကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်) ။
IPD ဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုခန့်မှန်းအတွက်ကြောင့်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှစိတ်ခွန်အားနိုးအချက်များနှင့်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်ခံစားချက်၏ညွှန်းကိန်းများအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုအကြားအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ဗဟိုခန့်မှန်း variable တွေကို (နဲ့အတူအလယ်အလတ်ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတွက်ချက်Cohen ကို, Cohen ကိုအနောက်, & Aiken, 2003) ။ S-IATsex ပေါင်းလဒ်ရမှတ်မှီခို variable ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းခုနှစ်, PCI-ES, S-IATsex ၏ 8.90% ကရှင်းပြခဲ့သည် F(၁၊ ၅၉) = ၅.၇၉၊ p = 0.02 ။ ဒုတိယအဆင့်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှု (အော်ဂဇင်ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုရခြင်း) ကိုထည့်သွင်းခြင်း၊ R2 = 0.006, ပြောင်းလဲမှုများ F(၁၊ ၅၉) = ၅.၇၉၊ p = 0.55 ။ PCI-SE နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုများအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောအခါ s-IATsex ၏ရှင်းပြချက်သည်သိသိသာသာတိုးများလာသည်။ R2 = 0.075, ပြောင်းလဲမှုများ F(၁၊ ၅၉) = ၅.၇၉၊ p = 0.03 ။ ခန့်မှန်းသူသုံး ဦး မှတစ်ဆင့် s-IATsex ၏ရှင်းပြချက်သည်သိသာထင်ရှားနေဆဲဖြစ်သည်။R2 = ၆၈.၃၃၊ F(၁၊ ၅၉) = ၅.၇၉၊ p = 0.01) ။ နောက်ထပ်တန်ဖိုးများအတွက်ကြည့်ပါ စားပွဲတင် 5.
စားပွဲတင်5။
မှီခို variable ကိုအဖြစ် s ကို-IATsex ပေါင်းလဒ်ရမှတ်နှင့်အတူ hierarchical ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
0.29 - ၃၆ 0.02
အဆိုပါ PCI-ES ၏သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြည့်ပေးထားသောကျနော်တို့ကိုပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်အလယ်အလတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြေရှင်းဖို့ရိုးရှင်းတဲ့တောင်စောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ "အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြည့်" ဘာသာရပ်များတဦးတည်းအဘို့ (ဆုတ်ယုတ်-based ခန့်မှန်းချက်ကိုကိုယ်စားပြုဆုတ်ယုတ်လိုင်း၏ဆင်ခြေလျှော SD အဖွဲ့၏ယုတ်ညံ့သောအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာသုညနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်။t = ၆၈.၃၃၊ p = 0.001) ။ "မြင့်မားသောလိင်မှုနှိုးဆွမှု" ကိုကိုယ်စားပြုသောဆုတ်ယုတ်မျဉ်းကြောင်း၏ဆင်ခြေလျှော (ဘာသာရပ်များအတွက်တစ်ခုအတွက်ဆုတ်ယုတ်မှုကိုအခြေခံသည့်ခန့်မှန်းချက်) SD အုပ်စုရဲ့ပျမ်းမျှအထက်) သုညကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်မဟုတ် (t = ၆၈.၃၃၊ p = 0.64) ။ တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်လိင်အပျော်အပါးသည်အလွန်မြင့်မားသည်ဖြစ်စေ၊ မနိမ့်သည်ဖြစ်စေလွတ်လပ်စွာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရှာဖွေရန်အွန်လိုင်းမှညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်မြင့်မားသောလှုံ့ဆော်မှုများခံရပါက s-IATsex ၏စုစုပေါင်းရမှတ်သည်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းဖော်ပြသည်။ သဖန်းသီး။ 1).
S-IATsex များ၏ပေါင်းလဒ်ရမှတ်မှီခို variable ကိုဖြစ်သည့်အတွက်အလယ်အလတ်ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆန္ဒပြ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြင့်မားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြည့်တွေ့ကြုံသောသူတစ်ဦးချင်းစီလွတ်လပ်စွာအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့သူတို့ရဲ့လှုံ့ဆျောမှုကနေကိုယ့်-IATsex အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ရှာကြံစိတ်လှုပ်ရှားမှုအဘို့အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်လျှင်အနိမ့်လိင်စိတ်နိုးထလက်ခံရရှိသူကိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် s ကို-IATsex အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။
4.1 ။ အထွေထွေသုံးသပ်ချက်
လေ့လာမှု၏အဓိကရလာဒ်များမှာ IPD နှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းမွန်သော၊ နိုးကြား။ အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိခြင်းအပြင်နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာရှောင်ရှားခြင်းတို့ဖြင့်အပြုသဘောဆောင်ခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ပုဂ္ဂလိကပတ်ဝန်းကျင်တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အတူပိုမိုကောင်းမွန်စွာ၊ နိုးနိုးကြားကြားရှိခြင်းနှင့်စိတ်အေးအေးထားခြင်းတို့ဖြင့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အတူတူဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင် IPD နှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းမပြုမီနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သော၊ အင်တာနက် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကြောင့် IPD နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှာဖွေခြင်းလမ်းကြောင်းများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအတွေ့အကြုံရှိအော်ဂဇင်၏ကျေနပ်မှုကိုအကဲဖြတ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များအနေဖြင့် IPD သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြည့်ဝမှုကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဆိုးရွားသည့်စိတ်ခံစားမှုများကိုရှောင်ရှားရန်သို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်ရန်တွန်းအားပေးခြင်းအပြင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများစားသုံးမှုနောက်တွင်စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်းသည် IPD နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟူသောယူဆချက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟူသောယူဆချက်နှင့်ကိုက်ညီသည် (Cooper က et al ။ , 1999 နှင့် Laier နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, 2014).
ဒါဟာ (စိတ်ကျရောဂါစိတ်ဓါတ်များသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှ functionalizing အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု IPD ဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေခြင်းငှါအစောပိုင်းက postulated ခဲ့သည်Cooper က et al ။ , 1999) ။ ကျနော်တို့ non-လက်တွေ့နမူနာစုံစမ်းစစ်ဆေးကတည်းကဖော်ပြရန်ရလဒ်များကိုသည်ဤလူတစ်ဦးချင်းစီ IPD ၏လက္ခဏာပြင်းထန်မှုများမဟုတ်ဘဲအနိမ့်ရမှတ်များ, စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်အစားအကောင်းတစ်ဦးယေဘုယျစိတ်ဓါတ်များသတင်းပို့ကဖော်ပြသည်။ သို့သော်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်တောင် non-လက်တွေ့နမူနာထဲမှာခံစားချက်တစ်ခုတိုးခြင်းနှင့်လိင်စိတ်နိုးထတစ်ကျဆင်းခြင်းစေပါတယ်။ IPD ဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမီနှင့်အပြီးခံစားချက်နှင့်အတူအဆိုးဆက်စပ်နှင့်အပြုသဘောခံစားချက်အတွက်သက်ဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုအလုပ်မဖြစ်ဖြေရှင်း၏တွေးဆ link ကိုအတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်နှင့် IPD ခဲ့ရလဒ် (Cooper က et al ။ , 1999) ။ IPD ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းအလုပ်မဖြစ်များ၏ဆက်စပ်မှုကိုလည်း (အလွန်မကြာသေးမီငါ-PACE မော်ဒယ်အတွက်မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပါတယ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, လူငယ်, Laier, ဝံပုလွေ, et al ။ , 2016) ။ I-PACE မော်ဒယ်လ်ကခန့်မှန်းထားသည့်အဓိကဝိသေသလက္ခဏာများစွာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်စိတ်ဖိစီးမှုခံစားရခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပconflictsိပက္ခများခံစားရခြင်းသို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောခံစားချက်မျိုးခံစားရသောအခြေအနေမျိုးတွင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်ဟုယူဆသည်။ ၎င်းသည်ထိရောက်သောနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများဆီသို့ ဦး တည်သွားစေသင့်သည်။ ဥပမာစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံကဲ့သို့သောအင်တာနက် application တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။ အင်တာနက် - ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းမှရရှိသောဆန္ဒပြည့်ဝမှုသည်အသုံးပြုသောကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုပုံစံကိုအားဖြည့်ပေးသည်၊ သို့သော်ထိုထက်ပိုသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သိမြင်မှုဘက်လိုက်မှုများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့် IPD လက္ခဏာများကိုရှင်းပြခြင်းအတွက်ဆန္ဒရှိခြင်း၏ဆက်စပ်မှုကိုအတန်အသင့်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းမှုတွင်တွေ့ရသည်။ အတွေ့အကြုံအော်ဂဇင်ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှု၏အကဲဖြတ်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြည့်ဝမှုနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးသောသူများသည် IPD နှင့် ပတ်သက်၍ အနိမ့်ဆုံးသဘောထားကိုတင်ပြကြသည်။ သို့သော်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိပါကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားကျေနပ်မှုရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေသီးခြားစီရှာဖွေခြင်းသည်တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့် IPD ၏လက္ခဏာပြင်းထန်မှုကိုပိုမိုမြင့်မားစေသည်။ ဤရလဒ်သည် I-PACE မော်ဒယ်၏အခြားယူဆချက်တစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအင်တာနက် - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုသည်ရေတိုတွင်စိတ်ကျေနပ်မှုရစေသင့်သည်၊ သို့သော်အချို့သောသူများသည်ဆန္ဒအလျောက်လျော်ကြေးပေးခြင်းမှနစ်နာကြေးအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိသည်။ စက်ဝိုင်းသည် cue-reactivity နှင့်တဖြည်းဖြည်းတက်ကြွမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အပြင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်ဆိုးကျိုးများပိုမိုများပြားလာခြင်းကိုပိုမို ဦး တည်စေသည်။ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, လူငယ်, Laier, ဝံပုလွေ, et al ။ , 2016) ။ လိင်စိတ်နိုးထတဲ့မူလတန်းနှင့်ထို့ကြောင့်ခိုင်ခံ့အားဖြည့်လှုံ့ဆော်မှု (အဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ကတည်းကGeorgiadis နှင့် Kringelbach, 2012 နှင့် Janssen, 2011) နှင့်စွဲလမ်း၏အခြေအနေတွင်အေးစက်ဖြစ်စဉ်များ၏နောက်ခံဆန့်ကျင် (Berridge, ရော်ဘင်ဆင်, & Aldridge, 2009), ဒါကြောင့်လိင်စိတ်နိုးထ cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာတုံ့ပြန်မှုရရှိလာတဲ့မှဦးဆောင်ပြင်ပနှင့်ပြည်တွင်းရေးကိုယခင်ကြားနေတွေကိုမှဆက်စပ်ဖြစ်လာနိုင်သည့်တစ်ဦးခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ယူဆသဘာဝကျပါတယ်။ ဒါဟာဆုလာဘ် related ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဘာသာရပ်ရိပ်မိတဏှာ (စွဲ-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို presentation ကိုမှဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုထိန်းချုပ်အတွက်ရိပ်မိပြဿနာများ၏ဦးနှောက်ဆက်စပ်မှုအကဲဖြတ်လေ့လာမှုများနှင့်အတူကိုက်ညီကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2016a နှင့် Voon et al ။ , 2014) ။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိရလဒ်စိတ်ကျရောဂါစိတ်ဓါတ်များသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အလုပ်မဖြစ်အသုံးပြုမှုတစ်ခု IPD ဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေခြင်းငှါ၎င်းခန့်မှန်းနှင့်အညီ၌ရှိကြ၏။ ရလဒ်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်များအတွက်သီအိုရီမူဘောင်အချို့ကိုအဓိကယူဆချက်ကိုထောကျပံ့ပေမယ့်ဒီမူဘောင်တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းတစ်ခုစွဲလမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှပံ့ပိုးယန္တရားများနှင့် ပတ်သက်. သတ်မှတ်ထားသောခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
4.2 ။ ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အနာဂတ်လေ့လာမှုများ
ကျနော်တို့ non- လက်တွေ့နမူနာစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်လက်တွေ့အယူအဆဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင် IPD နှင့် ပတ်သက်၍ နမူနာ၏သဘောထားသည်မှတ်သားဖွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်။ ရလဒ်များကိုအကူအညီရှာဖွေသည့်နမူနာတွင်အတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ အိမ်တွင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်နှင့်ကြည့်ပြီးနောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သဘောတူသူများကိုသာကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်းဘက်လိုက်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်တန်းသားများကို၎င်းတို့အနေဖြင့်၎င်းတို့အနေဖြင့်ဆက်နွယ်မှုရှိ၊ အလားအလာဘက်လိုက်မှုအဘို့ဤအနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်အဘို့အထိန်းချုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ပုဂ္ဂလိကပတ်ဝန်းကျင်ရှိဖြစ်နိုင်ခြေဘက်လိုက်မှုများကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏ဆိုးကျိုးများကိုစိတ်ဓာတ်အပေါ် (ဥပမာ - ရေရှည်လေ့လာမှုများနှင့်) အသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုသူအမျိုးသမီးများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်
(5th ed ။ ) အမေရိကန်စိတ်ရောဂါထုတ်ဝေရေး, Arlington, VA (2013)
Berridge et al ။ , 2009
KC Berridge, TE ရော်ဘင်ဆင်, JW Aldridge
ချက်ကိုပိုင်းခြားစိတ်ဖြာဆုလာဘ်၏အစိတ်အပိုင်းများ: "Like", "လို" နှင့်သင်ယူမှု
ဆေးဝါးဗေဒ,9(2009), စစအတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 65-73 http://doi.org/10.1016/j.coph.2008.12.014
PDF ဖိုင် (869 K)
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2011
အမ်အမှတ်တံဆိပ်, C. Laier, အမ် Pawlikowski, U. Schächtle, T. Schöler, C. Altstötter-Gleich
အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအကဲခတ်: အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုလိင်က်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု. များအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ ratings နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ-စိတ်ရောဂါလက္ခဏာတွေအခန်းက္ပ
CyberPsychology, အပြုအမူနှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 14 (2011), စစ။ 371-377 http://doi.org/10.1089/cyber.2010.0222
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2016a
အမ်အမှတ်တံဆိပ်, ဂျေ Snagowski, C. Laier, အက်စ် Maderwald
ပိုမိုနှစ်သက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲလက္ခဏာတွေဆက်နွယ်နေကြောင်းသောအခါ Ventral striatum လှုပ်ရှားမှု
NeuroImage, 129 (2016), စစ။ 224-232 http://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.01.033
PDF ဖိုင် (886 K)
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2014
အမ်အမှတ်တံဆိပ်, KS လူငယ်တို့, C. Laier
Prefrontal ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း: neuropsychological နှင့် neuroimaging တွေ့ရှိချက်များ၏သီအိုရီမော်ဒယ်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်
လူ့အာရုံကြောသိပ္ပံ, 8 (2014), p နယ်စပ်ဒေသ။ 375 http://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00375
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2016b
အမ်အမှတ်တံဆိပ်, K. လူငယ်တို့, C. Laier, K. Wolfling, MN Potenza
တိကျတဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်. ပေါင်းစပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ထည့်သွင်းစဉ်းစား: ပုဂ္ဂိုလ်-အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု-သိမှတ်ခံစားမှု-Executive (I-PACE) မော်ဒယ်တစ်ခု Interaction
neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်သုံးသပ်ချက်များ, 71 (2016), စစ။ 252-266 http://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2016.08.033
PDF ဖိုင် (2051 K)
ကမ့်ဘဲလ်နှင့် Kohut, 2016
အယ်လ်ကမ့်ဘဲလ်, T. Kohut
စိတ်ပညာအတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်, 13 (2016), စစ။ 6-10 http://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.03.004
Cohen ကို et al ။ , 2003
ဂျေ Cohen ကို, P. Cohen ကို, စင်ကာပူဒေါ်လာအနောက်, LS Aiken
အဆိုပါအမူအကျင့်သိပ္ပံများအတွက်အသုံးချမျိုးစုံဆုတ်ယုတ် / ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
လောရင့် Erlbaum Associates မှ, Mahwah, NJ (2003)
Cooper က et al ။ , 2004
Cooper က, ဃ Delmonico, အီး Griffin-Shelley, R. Mathis
လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း၊ ၁၁ (၂၀၀၄)၊ စစ။ ၁၂၉–၁၄၃ http://doi.org/11/2004
Cooper က et al ။ , 1999
Cooper က, DE Putnam, LS Planchon, SC Boies
အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive: အကျော့ကွင်း၌ညိတွယ်ပဲရှိသေး
လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း၊ ၁၁ (၂၀၀၄)၊ စစ။ ၁၂၉–၁၄၃ http://doi.org/6/1999
Duffy et al ။ , 2016
အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 13 (2016), စစ။ 760-777 http://doi.org/10.1016/j.jsxm.2016.03.002
PDF ဖိုင် (529 K)
Garcia ကနှင့် Thibaut, 2010
FD Garcia က, အက်ဖ် Thibaut
မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်အလွဲသုံးမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 36 (2010), စစ။ 254-260 http://doi.org/10.3109/00952990.2010.503823
Neurobiology, 98 (2012), စစအတွက်တိုးတက်မှုကို။ 49-81 http://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2012.05.004
PDF ဖိုင် (2215 K)
Griffiths က, 2012
MD Griffiths က
စွဲသုတေသန & သီအိုရီ, 20 (2012), စစ။ 111-124 http://doi.org/10.3109/16066359.2011.588351
Grubbs et al ။ , 2016
JB Grubbs, JJ Exline, KI Pargament, အက်ဖ် Volk, MJ Lindberg
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, ရိပ်မိစွဲလမ်းနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာ / ဘာသာရေးရုန်းကန်မှုများ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း (2016) http://doi.org/10.1007/s10508-016-0772-9
Hald နှင့် Malamuth, 2008
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 37 (2008), စစ။ 614-625 http://doi.org/10.1007/s10508-007-9212-1
Harkness et al ။ , 2015
EL Harkness, BM Mullan, အေ Blaszczynski
CyberPsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 18 (2015), စစ။ 1-13 http://doi.org/10.1089/cyber.2014.0343
ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ, 59 (2011), စစ။ 708-716 http://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2011.03.004
PDF ဖိုင် (324 K)
ကျွန်မသည် non-paraphilic hypersexual ရောဂါနှင့်အတူယောက်ျားအတွက် psychopathology DSM-IV ဝင်ရိုး
လက်ရှိစွဲအစီရင်ခံစာများ,2(2015), စစ။ 202-206 http://doi.org/10.1007/s40429-015-0060-0
Kraus et al ။ , 2016
အနောက်တောင်ဘက်တွင် Kraus, V. Voon, MN Potenza
တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive သငျ့သလော
စွဲ, 111 (2016), စစ။ 2097-2106 http://doi.org/10.1111/add.13297
Laier နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, 2014
C. Laier, အမ်အမှတ်တံဆိပ်
လိင်စွဲ & compulsivity, 21 (2014), စစ။ 305-321 http://doi.org/10.1080/10720162.2014.970722
Laier et al ။ , 2013
C. Laier, အမ် Pawlikowski, ဂျေ Pekal, လက်ဗွေ Schulte, အမ်အမှတ်တံဆိပ်
အပြုအမူစွဲ,2(2013), စစ၏ဂျာနယ်၏။ 100-107 http://doi.org/10.1556/JBA.2.2013.002
Laier et al ။ , 2014
C. Laier, ဂျေ Pekal, အမ်အမှတ်တံဆိပ်
CyberPsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 17 (2014), စစ။ 505-511 http://doi.org/10.1089/cyber.2013.0396
Laier et al ။ , 2015
CyberPsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 18 (2015), စစ။ 575-580 http://doi.org/10.1089/cyber.2015.0152
et al Love ။ , 2015
T. မေတ္တာတော်, C. Laier, အမ်အမှတ်တံဆိပ်, အယ်လ် Hatch, R. Hajela
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှုများနှင့် update ကို
အမူအကျင့်သိပ္ပံ,5(2015), စစ။ 388-433 http://doi.org/10.3390/bs5030388
Meerkerk et al ။ , 2006
G.-J. Meerkerk, RJJM ဗန်တွင်း Eijnden, HFL Garretsen
အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း - ဒါဟာလိင်အကြောင်းပဲ။
CyberPsychology & အပြုအမူ,9(2006), စစ။ 95-103 http://doi.org/10.1089/cpb.2006.9.95
ပေတရုနှင့် Valkenburg, 2014
ဂျေပေတရုသည် pm တွင် Valkenburg
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းထိတွေ့ခြင်းခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုတိုးပွားစေသလား တစ်ဦးက longitudinal လေ့လာမှု
လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာ, 36 (2014), စစ။ 297-307 http://doi.org/10.1016/j.chb.2014.03.071
PDF ဖိုင် (368 K)
DSM-5 များ၏အခြေအနေတွင် non-ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ
စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 39 (2014), စစ။ 1-2 http://doi.org/10.1016/j.addbeh.2013.09.004
PDF ဖိုင် (118 K)
ရိဒ် et al ။ , 2011
RC Reid, DS လီ, R. Gilliland ဂျေအေ Stein, တီ Fong သည်
ယုံကြည်စိတ်ချရမှု, တရားဝင်မှုနှင့် hypersexual ယောက်ျားတစ်နမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုစာရင်း၏ psychometric ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 37 (2011), စစ။ 359-385 http://doi.org/10.1080/0092623X.2011.607047
Rosenberg ကနှင့် Kraus, 2014
အိပ်ချ် Rosenberg က, SW Kraus
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်အတူညစ်ညမ်းအတွက် "အသည်းအသန်ပူးတွဲမှု" ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ညစ်ညမ်းဘို့တဏှာ၏ဆက်ဆံရေး
စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 39 (2014), စစ။ 1012-1017 http://doi.org/10.1016/j.addbeh.2014.02.010
PDF ဖိုင် (243 K)
ရော့စ် et al ။ , 2012
မဂ္ဂါဝပ် Ross က S.-A. Månsson, K. Daneback
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 41 (2012), စစ။ 459-466 http://doi.org/10.1007/s10508-011-9762-0
Schulz et al ။ , 2004
P. Schulz, ဒဗလျူ Schlotz, P. Becker က
Trierer Inventar zum Chronischen စိတ်ဖိစီးမှု (TICS)
Shaughnessy et al ။ , 2014
K. Shaughnessy, ES Byers, SL Clowater, အေ Kalinowski
တက္ကသိုလ်နှင့်ရပ်ရွာနမူနာအတွက် arousal-oriented အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ self-Appraiser
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 43 (2014), စစ။ 1187-1197 http://doi.org/10.1007/s10508-013-0115-z
Snagowski et al ။ , 2015
ဂျေ Snagowski, အီး Wegmann, ဂျေ Pekal, C. Laier, အမ်အမှတ်တံဆိပ်
ဘာစွဲအတွက်သွယ်ဝိုက်အသင်းအဖွဲ့များ: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူတစ်သွယ်ဝိုက်အစည်းအရုံးစမ်းသပ်ခြင်း၏ adapter
စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 49 (2015), စစ။ 7-12 http://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.05.009
PDF ဖိုင် (460 K)
Stanley et al ။ , 2016
N. စတန်လေ, C. ကုန်ဖလှယ်ရေး, အမ် Wood က, N. Aghtaie, C. လာကင်, အေ Lanau, C. Överlien
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလူငယ်များ၏ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေး - ဥရောပလေ့လာမှု
Interpersonal အကြမ်းဖက်မှုဂျာနယ် (2016) http://doi.org/10.1177/0886260516633204
Steyer et al ။ , 1997
R. Steyer, P. Schwenkmezger, P. Notz, အမ်မနက်စောစော
V. Voon, တီဘီ Mole, P. Banca, အယ်လ်ပေါ်တာ, အယ်လ်မောရစ်, အက်စ်မစ်ချယ်, ... အမ် Irvine
နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue reactivity ကို၏အာရုံကြောဆက်စပ်
PloS One ကို,9(2014), အပိုဒ် e102419 http://doi.org/10.1371/journal.pone.0102419
Wéryနှင့် Billieux, 2015
Wéry, ဂျေ Billieux
ပြဿနာဘာ: Conceptual, အကဲဖြတ်နှင့်ကုသရေး
စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 64 (2015), စစ။ 238-246 http://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.11.007
Wéry et al ။ , 2015
Wéry, ဂျေ Burnay, အယ်လ် Karila, ဂျေ Billieux
လိင်သုတေသန 30 (2015), စစ၏ဂျာနယ်၏။ 1-10 http://doi.org/10.1080/00224499.2015.1051213
KS Young က
အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲ: အန္တရာယ်အချက်များ, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်ဆင့်နှင့် htreatment
အမေရိကန်အပြုအမူသိပ္ပံပညာရှင်, 52 (2008), စစ။ 21-37 http://doi.org/10.1177/0002764208321339
အထွေထွေစိတ်ပညာ: မှာစာရေးသူကသက်ဆိုင်ရာသိမှတ်ခံစားမှု, အပြုအမူစွဲသုတေသန Duisburg-အက်ဆင်းနှင့်စင်တာတက္ကသိုလ် (CeBAR), Forsthausweg 2, 47057 Duisburg, ဂျာမနီ။
© 2016 အာဏာပိုင်တွေ။ Elsevier BV ထုတ်ဝေသည်
လက်ခံစာမူဤစာအုပျ၏အယ်ဒီတာ့အာဘော်ဘုတ်အဖွဲ့ကသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ထုတ်ဝေရန်လက်ခံခဲ့သည်ခဲ့ကြကြောင်းစာနယ်ဇင်းများတွင်ဆောင်းပါးများဖြစ်ကြသည်။ စသည်တို့ကိုသူတို့ဟာသေးမိတ္တူ edited နှင့် / သို့မဟုတ်ထုတ်ဝေရန်အိမ်သူအိမ်သားစတိုင်ပုံစံချထားသော်လည်း, အပြည့်အဝ ScienceDirect လုပ်ဆောင်ချက်ကိုရှိသည်မဟုတ်စေခြင်းငှါ, ဥပမာခဲ့တာရှိသည်မဟုတ်, ဖြည့်စွက်ဖိုငျနဆေဲဆက်ပြောသည်ခံရဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်, ကိုးကားရန်လင့်များသေးဖြေရှင်းရန်မည်မဟုတ်ပါစာသားတတျနိုငျသ နေဆဲနောက်ဆုံးထုတ်ဝေမတိုင်မီပြောင်းပေးပါ။
လက်ခံထားသောလက်ရေးမူများ၌ဖော်ပြထားသောကျမ်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုမရရှိနိုင်သော်လည်းအွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည့်နှစ်နှင့် DOI ကို အသုံးပြု၍ ကိုးကားနိုင်သည် - စာရေးသူ (များ)၊ ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှု (နှစ်), DOI ။ ဤအရာများအတိအကျပေါ်လာခြင်း၊ ဂျာနယ်နာမည်အတိုကောက်နှင့်ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်သုံးခြင်းများအတွက်ဂျာနယ်၏ရည်ညွှန်းပုံစံကိုဖတ်ပါ။